Energies azo havaozina - Green azo havaozina | Green Renewables (Pejy 3)
Orinasa espaniola (TSK) ao ambadiky ny valan-javaboary masoandro lehibe indrindra any Azia
Dubai dia manana fametrahana masoandro vaovao any an'efitra. Ny valan-javaboary dia antsoina hoe Mohammed Bin Rashid, naorin'ny TSK ary izy no lehibe indrindra ao Moyen Orient.
Asa miaraka amin'ny angovo azo havaozina
Ny indostrian'ny angovo azo havaozina dia nitombo be tato anatin'ny taona vitsivitsy, noho izany misy fitakiana asa bebe kokoa amin'ity sehatra ity.
ANDRO EARTH 2018 dia ny 22 aprily
Ankalazaina ny 2018 aprily toy ny isan-taona ny Andron'ny Tany 22. Ny taona 1970 no taona voalohany nanaovana an'io hetsika io. Fivoarana angovo azo havaozina
Angovo avy amin'ny masoandro ... miaraka amin'ny orana!. Ny sela masoandro vaovao miaraka amin'ny graphene
Miaraka amin'ny fivelaran'ny sela vaovao miaraka amin'ny graphene dia azo atao ny mahazo angovo avy amin'ny masoandro miaraka amin'ny ranonorana. Fahombiazana iray ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro.
Fitehirizana ny rivotra voafehy hiteraka herinaratra
Fanangonana rivotra voahidy hampiasa azy io ho bateria angovo azo havaozina raha tsy misy angovo ireo miaraka amin'ny tetikasa RICAS 2020.
Ny tsy ampoizin'ny herin'ny masoandro! Io no mora indrindra
Miova ny tsenan'ny angovo eran-tany, lasa ny angovo azo avy amin'ny masoandro no fomba mora indrindra hahazoana herinaratra
Avangrid, sampana iray an'ny Iberdrola, dia hanangana toeram-pambolena rivotra ho an'i Apple
Iberdrola dia hanome herinaratra an'i Apple mandritra ny roapolo taona ho avy amin'ny alàlan'ny valan-javaboary iray any Oregon, izay hampiasainy 300 tapitrisa dolara.
Ny fivoarana, ny fiasa ary ny ho avin'ny fiompiana rivotra. Ny fananganana turbinin'ny rivotra. Ny maha-zava-dehibe ny angovo avy amin'ny rivotra.
Ny governemanta dia namoaka tao amin'ny BOE fa manome alalana an'i Renovables de Sevilla SL ny fametrahana masoandro 110MW Guillena photovoltaic. Ny hoavin'ny angovo avy amin'ny masoandro.
Ny tetik'asa Life + Methamorpohis dia misy ny fampiasana rano maloto ho loharanom-angovo hafa ary hampiasana azy io ho biofuel.
Amin'ny 2017, herinaratra mahery maherin'ny 60.000 MW no hapetraka eto amin'izao tontolo izao
Tamin'ny 2016, maherin'ny 54.000 MW ny angovo napetraka tany amin'ny firenena 90 mahery. Ny fahafaha-nanangona manerantany dia nitombo 12,6% tamin'ny taon-dasa, ka lasa 486.000 MW
Ny fitantanana ny ala sy ny angovo biomassa ho loharano maharitra
Ahoana no tokony hamenoana ny fitantanana ny ala sy ny biomass maharitra mba hialana amin'ny fandringanana ny ala manerantany? Jereo eto
Nitsahatra tsy nampiasa arina intsony i UK mba hiteraka herinaratra 135 taona aty aoriana
Io no firenena voalohany nampiasa arina hamokatra herinaratra, 135 taona taty aoriana, izy no voalohany amin'ny ...
Fepetra hahatratrarana ny tanjon'ny angovo amin'ny 2030
Nisy antontan-taratasy momba ny tanjon'ny angovo tamin'ny 2030 navoakan'ny IEA, ny Banky Iraisam-pirenena na IRENA amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena hafa.
Ho vitantsika ve ny hampiato ny rivo-doza ka hitahiry ny heriny?
Amin'ny tafio-drivotra sy tafio-drivotra tropikaly, ny rivotra dia mitondra angovo be dia be azo ampiasaina mba hiteraka herin'ny rivotra.
3% fotsiny ny angovo any amin'ny Nosy Balearic no azo havaozina
Ny Greens / European Free Alliance (Greens / Ale) ary MÉS isaky ny Mallorca dia mampiseho malaise lalina satria any amin'ny Nosy Balearic «amin'ny 3 fotsiny…
Silicon Valley, avy amin'ny angovo avy any ivelany an'ny firenena eropeana telo
Ny lohasaha Silicon an'ny angovo avy any ivelany dia ny tetikasa Power Link Islands izay miorina ao amin'ny Dogger Bank noforonin'i Alemana, Danemarka ary Netherlands.
Azo atao ny mamokatra angovo rehefa mandeha ianao (Pavegen tile)
Ny mitaingina haingana any amin'ny seranam-piaramanidina, ny toeram-pivarotana ary ny kianja filalaovam-baolina dia afaka miteraka angovo ary mampihena ny faktiora noho ny taila mahavariana Pavegen
Ny banky dia mandefa ny findramam-bola maintso
Ny andrim-panjakana ara-bola dia nanolotra ny Green Loan, vokatra "noforonina mba hanamorana ny fahazoana angovo azo havaozina"
Trano misy fanjifana angovo saika aotra
Any Espana dia mbola lavitra ny lalana hanarahana ny torolàlana Eoropeana 2010/31 mba hananganana tranobe amin'ny alàlan'ny angovo faran'izay betsaka hatramin'ny taona 2020
Ny tsena manerantany ho an'ny herin'ny rivotra kely dia hitombo 20% ao anatin'ny dimy taona
Tatitra vaovao avy amin'ny forecasts an'ny Research and Markets fa ny tsena manerantany ho an'ny herin'ny rivotra kely dia hitombo mihoatra ny 20% amin'ny taona ho avy.
Fahadisoana lehibe ataon'ny Minisitera ny fiatrehana ireo teknolojia havaozina amin'ny lavanty
Ny Association of the Renewable Energy Companies-APPA dia manameloka ny rotsakorana, ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana ary ny tsy fisian'ny drafitra momba ny lavanty azo havaozina.
Tanànan'ny masoandro voalohany any Amerika, Babcock Ranch
Ny tanànan'ny masoandro voalohany dia any Etazonia ary hantsoina hoe Babcock Ranch, tanàna iray hanana orinasa mpamokatra masoandro, zaridaina eny amin'ny fiarahamonina sns.
Azon'i Azia atao ny hisambotra an'i Eropa amin'ny herinaratra biomassa
Tamin'ny 2015 ny fahasamihafana misy eo amin'ny ASIA sy EUROPE dia mihoatra ny 6.000 MW ary herintaona taty aoriana dia zara raha nahatratra 1.500. Fivoarana sy ny hoavin'ny biomassa
Raha tsy manova ny lalàna mifehy ny angovo azo havaozina i Espana dia tsy hanaraka ny fifanarahana tany Paris izy io
Tsy afaka hahatratra ny tanjona napetraky ny Fifanarahana Paris tamin'ny taona 2050 i Espana raha tsy manova ny lalàna mifehy ny havaozina.
Mendrika ny hividianana panneaux solaires faharoa ve?
Alohan'ny hividianana panneaux sindiran'ny tanana faharoa dia tsy maintsy dinihintsika ireo lafin-javatra samihafa hahasoa ny fampiasam-bolantsika.
Fisondrotana Photovoltaic any Amerika Latina
Manomboka amin'ny tsy fananana fametrahana fotovoltaika amin'ny fiandohan'ity folo taona ity ka hatramin'ny vinavinan'ny vinavina izay maminavina mihoatra ny 40 GW napetraka amin'ny faran'ny azy.
Hydrotor, fomba vaovao hijerena angovo hydraulic
Hydrotor, ny turbine micro vaovao afaka mamokatra angovo hydraulic avy amin'ny farafaran'ny renirano na ny annexes an-dry zareo amin'ny fomba mahomby. Vita soa aman-tsara any Espana.
Afaka 10 taona dia ny angovo azo havaozina no loharanon'ny angovo mora vidy indrindra
Tamin'ny taona 2016, napetraka ny herim-panavaozana 9% bebe kokoa, raha 23% kosa ny kely noho ny tamin'ny taon-dasa noho ny fanavaozana lehibe teo amin'ny sehatra
Zavatra 6 tokony ho fantatrao momba ny herin'ny rivotra kely
Ny angovo rivotra kely dia vahaolana hampihenana ny fanjifana angovo herinaratra. Izy io dia afaka mamokatra herinaratra samirery ary mitahiry ny faktioran'ny herinaratrao
Greenpeace dia manala ny angano angovo azo havaozina
Greenpeace dia milaza fa ny tontolo iray manana angovo madio ho an'ny rehetra dia azo atao ary azo atao, ka izay no nanokanany tena hanongana ny sasany amin'ireo angano manan-danja indrindra
Kajy ny lumens herinaratra mitsitsy angovo
Amin'ny jiro fanavotana angovo dia sokajintsika izy ireo arakaraka ny hamirapiratany, miaraka amina singa antsoina hoe "lumens" izay manondro mazava tsara ny habetsaky ny hazavana avoaka.
Fanoloran-tena lehibe an'i Barcelona amin'ny 'angovo azo avy amin'ny masoandro'
Barcelona dia miasa amin'ny fampiroboroboana ny angovo avy amin'ny masoandro, miaraka amin'ny tanjon'ny fampitomboana ny herinaratra monisipaly avy amin'ny angovo fotovoltaika
Ny governemanta dia mampihena ny «premiums» amin'ny lavanty manaraka azo havaozina
Ny ministera dia nampihena ny habetsaky ny fanampiana betsaka indrindra ho an'ireo mpandresy amin'ny lavanty manaraka. 11% ho an'ny rivotra, ary 22% ho an'ny photovoltaic
Toy izany koa ireo taila amin'ny masoandro izay handrakotra ireo trano amin'ny ho avy tsy ho ela
Tsy toy ny takelaka photovoltaic apetraka amin'ny tampon-trano, ny taila amin'ny masoandro dia tsara tarehy ary mitovy fahombiazana amin'ny takelaka iray ihany.
Ny Nosy Canary dia manova ny maodelin'ny angovo misy azy ireo: Avy amin'ny solika mankany amin'ny havaozina
Ireo olana telo amin'ny maodely angovo Canary (sy ny vahaolana). Ny fifandraisana eo amin'ireo nosy. Ny fampiasana angovo azo havaozina bebe kokoa. solitany
Tesla dia te-hanangana tanàna maharitra indrindra eto an-tany
Tesla dia hanangana tanàna iray omena 100% amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina, miaraka amin'ny fitaterana herinaratra manokana sy ny arabe feno mpandeha an-tongotra
Ny UNEF dia mangataka amin'ny TS hampiato ny varotra mihombo
Nangataka tamin'ny Fitsarana Tampony ny UNEF mba hampihatra ny fepetra fisorohana ny fampiatoana ny varotra azo havaozina manaraka. Satria manohana Wind Energy izy io
Tambajotra hafanana biomassa ho an'ny mponina 6000 no hapetraka ao Guadalajara
Guadalajara dia hanana tamba-jotra hafanana biomassa izay hamatsy angovo hafanana ho an'ny mponina 6.000. Fivoarana sy ho avin'ny biomassa. Mitsitsy angovo.
Tao anatin'ny folo taona avy tany Barcelona ka hatrany Madrid tsy nisy solika
Wright Electric dia nametraka tanjona ny fananganana fiaramanidina masoandro ao anatin'ny 10 taona. Fivoarana sy ho avin'ny fiara elektrika. Fiaramanidina masoandro
Mangataka canon-drivotra ny tanàna kely Catalan
Ny AMEC dia miantso ny fametrahana kanona amin'ny fiompiana rivotra, hiadiana amin'ny fahantrana sy ny fahanteran'ny tanàna
Miantso lavanty 3.000 megawatt azo havaozina ny governemanta
Nankatoavin'ny governemanta ny RD izay miantso lavanty teknolojia havaozina hatramin'ny 3000 MW. Fivoarana sy hoavin'ny fanavaozana azo havaozina any Espana
Ny filankevitry ny tanànan'ny BCN dia mamorona mpivarotra am-bahoaka lehibe indrindra any Espana
Voalohany dia i Cádiz ary i Barcelona izao. Nanapa-kevitra ny tsy hanao herinaratra ny renivohitra ary hamorona ny mpivarotra azy manokana Barcelona Renewable Energy
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia amin'ny lamaody
Zava-bita vaovao amin'ny angovo photovoltaic, fotodrafitrasa vaovao, ny ho avin'ny angovo azo havaozina, fironana vaovao, ny foibe Intersolar any Alemana.
Angovo avy amin'ny masoandro sy ny angovo azo havaozina hafa
Ny tombony lehibe amin'ny angovo avy amin'ny masoandro noho ny havaozina hafa toy ny angovo rivotra sy angovo azo avy amin'ny rano.
Greenpeace fanoherana ny fanakanana ny herinaratra azo havaozina
Nalefa ireo mpikatroka Greenpeace hanameloka ny politikan'ireto orinasa ireto manakana ny angovo azo havaozina sy ny fandotoana
Fandrosoana izay hanavao ny angovo azo havaozina (Panels Solar mitsingevana ary Solar Tinta)
Ny fandrosoana ara-teknolojia dia nanamora ny fanararaotana ny masoandro sy ny rivotra. Hevitra hanatsarana ny fahaizanao. Ny ho avy ho avy
Donald Trump dia manome baiko hanoherana ny fanavaozana
Inona no vokatr'ity kaomandy ity amin'ny fampiasana havaozina sy ny fiankinan-doha amin'ny toekarena amerikana amin'ny lasantsy fosily?
Mikasa ny hitondra trano 3,8 tapitrisa i Alemana hanofana angovo fotovoltaika
Fivoaran'ny angovo fotovoltaika sy herinaratra, maodely ara-barotra vaovao, fanjifana tena, mpanangona trano sy indostrialy, bateria Lithium-ion
Ny angovo avy any ivelany an'ny eropeana dia miandry taona maro
Ny ho avin'ny angovo azo havaozina. Fivoaran'ny angovo avy any ivelany ary ny ho avy tsy ho ela. Ny fiompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany
Misokatra indray i Espana amin'ny sehatry ny havaozina
Tantaran'ny havaozina, ny fisondrotan'ny sehatra, ny fianjeran'ny sehatra. Fahafahana vaovao. Ny hoavin'ny angovo azo havaozina (rivotra, masoandro, hidy ...)
Ny fametrahana angovo masoandro lehibe indrindra any Córdoba dia ao amin'ny fivarotana lehibe
Ny supermarket Deza dia nametraka photovoltaic 32,4 kW ho an'ny fividianana tena, izay ahafahanao mitahiry 15% amin'ny volanao amin'ny herinaratra.
Rano azo itehirizana angovo avy amin'ny masoandro
Ekipa mpikaroka iray avy ao amin'ny Chalmers no naneho fa azo atao ny mitahiry mivantana ny angovo avy amin'ny masoandro ao anaty tsiranoka simika
Namorona sela solar super
Yoshikawa dia nanolotra ny valin'ny photovoltaic voalohany izay nihoatra ny 26% fahombiazana hanovana ny jiro ho angovo azo avy amin'ny masoandro.
Noraran'i Failandy ny fampiasana arintany hamokatra herinaratra alohan'ny 2030
Ny Governemanta Finnish dia nanolotra drafitra sehatry ny angovo stratejika handrara ny fampiasana arintany amin'ny famokarana herinaratra amin'ny 2030
Castilla y León dia hamatsy vola miaraka amin'ireo tetik'asa mahomby amin'ny angovo 3 M € any amin'ireo vondrom-piarahamonina manodidina
Famatsiam-bola ao Castilla y León. Fahombiazan'ny angovo. Fanatanterahana angovo azo havaozina any an-tanàna. Tambajotram-panafody vaovao ao Olot
Manolo-kevitra ny famoronana lagoons artifisialy izy ireo hiteraka angovo.
Orinasa UK dia manolotra tetik'asa hamoronana dobo artifisialy sy hahazoana angovo azo havaozina amin'ny alàlan'ny angovo avy amin'ny rano.
Ny ho avin'ny angovo avy amin'ny rivotra
Fivoaran'ny angovo rivotra, turbine rivotra vaovao. Repower valan-javaboary taloha. Valan-javaboary ivelan'ny morontsiraka. Prototype vaovao matanjaka kokoa
Ny fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina dia hampitombo ny harinkarena faobe manerantany
Ny angovo azo havaozina dia mahazo fahaiza-manao bebe kokoa ary fifaninanana bebe kokoa. Ny fampiasam-bola amin'ny havaozina dia hanampy antsika hampitombo ny harinkarena faobe.
Ny rivotra any ivelany dia ho lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fanavaozana
Ny angovo avy any ivelany dia miditra an-tsena ary mahazo ny fifaninanana .. Hanao ahoana ny tontolon'ny angovo rivotra ao anatin'ireo folo taona manaraka?
Orinasa vaovao an'i Tesla any Hawaii: batterie 272 amin'ny iray
Tesla dia manohy ny drafitra fanitarana azy ireo hanomezana angovo madio ireo nosy lavitra any Pasifika. HyperLoop, SpaceX, Solarcity, Powerwall, Powerpack
Ny EU dia mitaky fanazavana avy any Espana momba ny sakana amin'ny fanjifana tena amin'ny herinaratra
Fiampangana an'i Bruxelles amin'ny vato misakana napetrak'i Espana amin'ny fanjifana tena amin'ny herinaratra, ny veto an'ny olom-pirenena ary ny PP amin'ny fanjifana tena. Fivoarana angovo azo havaozina
Espana, ohatra ratsy amin'ny sehatra azo havaozina
Ny fanovana ankapobeny ny rafitry ny angovo manerantany, ny fivoaran'ny sehatra azo havaozina, ny vokatry ny fampiasana fitaovana fôsily.
Ny fampiroboroboana ny fanavaozana dia mampidina ny entona entona entona
Fiovan'ny toetrandro sy ny vokany. Ny fiakaran'ny maripana any Espana. Mampihena ny famoahana entona entona noho ny fihenan'ny arintany
28% amin'ny herinaratra eran-tany amin'ny taona 2021 no havaozina
Ny ahiahy amin'ny tontolo iainana dia nitombo tato ho ato eo amin'ny mponina manerantany. Fivoarana angovo azo havaozina. Turbine rivotra vaovao
Alemana hamadika ny toeram-pitrandrahana arintany ho lasa toby famokarana herinaratra mahery vaika
Hatramin'ny taona 2018, Alemana dia tsy hampiasa toeram-pitrandrahana arintany intsony. Fivoaran'ny angovo herinaratra. Angovo azo havaozina any Costa Rica.
Ny PP sy ny C dia manohana ny lalàna mifehy ny fanjifana tena
Nanaiky ny filankevitry ny kongresy, miaraka amin'ny fanohanan'ny PP sy ny olom-pirenena, ny veto an'ny governemanta amin'ny fanjifana tena. Fivoaran'ny angovo azo havaozina
Mampalahelo fa mikatso i Espana amin'ny fampiasana angovo azo havaozina
Mikatso i Espana amin'ny fampiasana havaozina. Fivoaran'ny angovo azo havaozina. Vokatry ny fampiasana fitaovana fôsily. fividianana zon'ny CO2
Ny turbine rivotra an-dranomasina voalohany any Espana dia ao amin'ny rano Canary
Ny Nosy Canary dia hanana ny turbine rivotra voalohany any Espana: Evolution Wind Energy. Angovo azo havaozina ao amin'ny Nosy Canary. Fampiharana ny tetikasa Plocan
Famoronana masoandro 5 ambony nanamarika indrindra
Betsaka ny famoronana masoandro, ny sasany tsotra ary ny sasany manana faniriana fatratra naneho fa azo itokisana ny angovo azo havaozina
Inona no hitranga any Eropa amin'ny angovo azo havaozina sy ny fanjifana tena?
E.ON dia manentana ireo mpampiasa azy hampiasa tena ary hampihatra rafitra antsoina hoe SolarCoud izay ahafahana mamokatra sy mamonjy herinaratra. Ho avy amin'ny fanjifana tena
Mankany Amerika Latina ny fanavaozana Espaniola
Ireo orinasa Espaniola dia mahita ny hoaviny any Amerika Latina miaraka amin'ny angovo azo havaozina ho iray amin'ireo ekena indrindra manerantany.
Ny fanambin'ny angovo azo havaozina ao amin'ny Nosy Canary
Manantena ny governemanta fa miaraka amin'ny quota vaovao, afaka fotoana fohy dia afaka miala amin'ny fanavaozana 9% ka hatramin'ny 21% isika.
Ahoana ny fikajiana ny isan'ny takelaka ilaina amin'ny masoandro?
Izahay dia manao kajy hoe ohatrinona ny takelaka masoandro ilainao, ny tena mpiorina amin'ny angovo masoandro, ary ny fivoarany amin'ny taona ho avy
Elon Musk: "Raha tsy afaka mamaha ny olan'ny angovo any Aostralia ao anatin'ny 100 andro aho dia hataoko maimaim-poana"
Nilaza ny mpanorina Tesla fa afaka mamaha ny olan'ny angovo any Aostralia atsimo. Evolution Tesla, SpaceX, Hyperloop ary SolarCity
Hampiasa vola miliara dolara ho an'ny havaozina i Tonizia
Mikasa ny hampiasa vola sahabo ho iray tapitrisa dolara i Tonizia hahafahany mampitombo ny famokarana angovo amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny herinaratra ao amin'ny firenena.
Operation Air hamantarana ny fandoroana ireo hazo voatsabo
Miaraka amin'ny Operation Air, harahi-maso ny fandoroana ireo hazo voatsabo satria mampidi-doza io noho ireo zavatra poizina namoaka
Ny filan'ny olombelona amin'ny angovo azo havaozina: Watly
Ity tetik'asa ity dia tohanan'ny famatsiam-bola avy amin'ny tetikasa Horizon 2020 ary efa hanolotra ny masinina Watly manontolo voalohany.
I Netherlands dia firenena voalohany manerantany miaraka amina lamasinina 100%
Ny Netherlands dia mampiroborobo ny revolisiona heriny amin'ny 'fiarandalamby'. Tsy nampoizina ny fanovana raha tsy tamin'ny taona 2018. Mampiasa angovo avy amin'ny rivotra
Fahasamihafana eo amin'ny angovo sy ny onja
Ny tena ilaina eo anelanelan'ny angovo sy ny angovo onja ary ny tombony sy ny fatiantoka sasany
Turbine rivotra mahomby 35% noho ny elatry ny bibikely
Fivoarana sy ho avin'ny angovo avy amin'ny rivotra, famoronana turbine rivotra mahomby kokoa noho ny fandalinana ireo elatry ny bibikely. Video of the turbine V164
Fampiasana ny tany marginal amin'ny famokarana biomassa
Aroso ny fampiasana ny tany marginaly amin'ny fambolena zavamaniry sasany izay hatokana manokana amin'ny famokarana biomass maharitra.
Olot (Girona) dia mamorona ny tamba-jotra fanaovan-drivotra voalohany mifototra amin'ny angovo telo azo havaozina
Olot dia vao avy nandefa ny tambajotram-panafody fanavaozana voalohany azo havaozina. Ny fampiasana geothermal, photovoltaic ary biomass
Inona ny, ny fomba namokarana azy ary ny fampiasana inona no ananan'ny angovo masoandro photovoltaic
Ahoana ny famoronana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic, izay sehatra ampiasantsika azy? Ahoana ny fomba fivoarany ary hanao ahoana ny hoaviny? Inona ny olana voavahany?
Lalam-by misy tafo masoandro
Izao tontolo izao dia miezaka manararaotra ny herin'ny angovo madio indrindra.
Ny kolontsaina ny tontolo iainana Espaniola dia ambany
Ny fiarovana ny tontolo iainana dia eo amin'ny laharana fahatelo amin'ny lisitr'ireo ahiahy ho an'ny Espaniôla, ao ambadiky ny tsy fananan'asa sy ny fisotroan-dronono.
Ny turbinin'ny rivotra lehibe indrindra eto an-tany
Vestas dia nanolotra ny fanavaozana ny turbine rivotra lehibe indrindra eto an-tany. Ny V164, milina fitotoana 220 metatra manana lelany 38 taonina sy 80m ny halavany
Solar trano, ny trano amin'ny ho avy
Ny tranon'ny masoandro dia mety misy karazany maro samy hafa miaraka amin'ny tombony toy ny panneaux solaires, fanjifana rano ambany. Ny trano amin'ny ho avy dia eto.
Ny toeram-piompiana rivotra be ranomasina lehibe indrindra eto an-tany
Ny toeram-piompiana an-dranomasina an-dranomasina lehibe indrindra dia any Kent (Angletera), naorin'i EON sy DONG. Fivoaran'ny angovo avy any ivelany ary ny hoaviny.
Madrid dia manao fampirantiana angovo azo havaozina (GENERA)
Manomboka amin'ny 28 Febroary ka hatramin'ny 3 martsa, ny IFEMA dia mandray ny foara GENERA amin'ny angovo azo havaozina. Afaka mahita ny tolo-kevitr'ireo orinasa 76 ianao.
"Tapitra ny vanim-potoanan'ny solika fôsily, ao anatin'ny vanim-potoanan'ny angovo azo havaozina isika"
Fivoaran'ny Forum III Solar, ho avy angovo azo havaozina. Fanehoan-kevitry ny kaomisera eoropeana misahana ny toetrandro sy angovo Miguel Arias Cañete.
Ny famoronana vaovao miorina amin'ny tontolo iainana dia manampy amin'ny angovo azo havaozina
Betsaka ny zava-baovao noforonina noho ny fiasa amin'ny angovo azo havaozina sy ny fahalianana amin'ny fanatsarana azy ireo amin'ny ho avy.
Ny toeram-pambolena rivotra lehibe indrindra any Espana dia any El Andévalo (Huelva)
Fivoaran'ny herin'ny rivotra any Espana. Any Andévalo (Huelva) no ahitantsika ny fiompiana rivotra lehibe indrindra any Espana (292 MW), fananan'i Iberdrola Renovables
Alatsinainy 6 Febroary, Espana dia namokatra herin'ny rivotra betsaka noho ny firenena eropeana hafa
Espaniola dia namokatra angovo rivotra betsaka kokoa tamin'ny alatsinainy teo noho ny firenena eropeana hafa, hoy ny fanazavan'ny sehatra DailyWind, famokarana angovo angovo any Eropa.
Làlana maharitra iray kilaometatra lava ao Normandy
Tetikasa Wattway, ny làlam-pahazavana voalohany natsangana tany Frantsa, miaraka amin'ny lafy tsarany sy maharatsy azy rehefa nandany 5 tapitrisa €. Fomba vaovao hiteraka angovo
Costa Rica dia mamokatra angovo azo havaozina efa ho 100% amin'ny taona manaraka.
Izahay dia mamakafaka ny zava-misy ankehitriny amin'ny famokarana angovo azo havaozina any Costa Rica, izay loharano niavian'ny angovo sy izay hoaviny
Taratasy masoandro mitsingevana, vahaolana amin'ny tsy fahampian'ny habaka
Japon sy Korea atsimo dia mitarika ny fampiasana tahirin-tsiranoka amin'ny fametrahana panneaux photovoltaic hanomezana olom-pirenena an'arivony
Ny indostrian'ny masoandro eto amin'izao tontolo izao
Izahay dia mamakafaka ny toe-draharaham-panjakan'ny masoandro eto an-tany amin'izao fotoana izao, izay tena mpiandany aminy, ary ny fivoarany amin'ny taona ho avy
Herin'ny rivotra eto amin'izao tontolo izao
Izahay dia mamakafaka ny zava-misy ankehitriny momba ny angovo avy amin'ny rivotra eto amin'izao tontolo izao, izay izy no tena mpiaro azy, ary ny fivoarany tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Fujisawa no tanàna maharitra sy maharitra voalohany ao Japon
Ity tanànan'ny fizakan-tena ity dia ao Fujisawa. Toerana lehibe iray izy io ary misy trano fivelomana manodidina ny arivo.
Kiobà dia manangana valan-javaboary miisa 59 hiteraka angovo madio
Kiobà dia manangana valan-javaboary 59 ary te hanatevin-daharana ny tanjona hahatratra 24% ny famokarana herinaratra avy amin'ny angovo madio amin'ny 2030.
Angovo azo havaozina amin'ny rivotra: angovo azo avy amin'ny rivotra
Izay rehetra mifandraika amin'ny angovo aeroterma. Inona no atao hoe angovo aeroterma, ahoana ny asany, aiza no ampiasana azy, tombony omeny antsika sy ny zava-bitany
I Islandy dia mitrandraka ilay lavadrano mafana indrindra eto an-tany ao afovoan'ny volkano
I Islandy dia mitrandraka ity fantsakana geothermal ity amin'ny volkano 5 kilometatra ary izany no antony lalina indrindra eto an-tany.
Boiler biomassa sy ny adihevitra momba ny fifandanjana CO2
Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ireo boiler biomass samihafa sy ny adihevitra momba ny fifandanjana CO2 misy amin'ny angovo biomassa isika.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny angovo biolojika na angovo biomassa
Ny angovo avy amin'ny biomassa na bioenergy dia tsy dia fantatra loatra ary ampiasaina kokoa noho ny karazana angovo azo havaozina hafa. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatsika ny momba azy rehetra.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny angovo geothermal
Izay rehetra mifandraika amin'ny angovo geothermal. Avy amin'ny inona izy io, ny fomba fiasa sy ny tombony ary ny fatiantoka eo amin'ny tontolon'ny angovo azo havaozina.
Nanohy nanapaka ny firaketana ny angovo azo havaozina rehetra tamin'ny taona 2016 i Sina
I Sina dia manao asa fandraharahana ary mitady ny fomba haingana indrindra hanovana ny arintany mankany amin'ny angovo madio, ao anatin'izany ny famakiana ireo firaketana an'izao tontolo izao
Azo atao ve ny manome ny nosy iray amin'ny angovo azo havaozina?
Ao amin'ny Nosy Canary dia ahitantsika ny El Hierro, nosy afaka mamatsy tena saika feno fotsiny amin'ny angovo azo havaozina.
Nanaiky ny drafitra angovo azo havaozina an'arivony tapitrisa dolara i Shina
Nanambara drafitra an-tapitrisany dolara i Shina mba hampiroboroboana ny fikarohana angovo azo havaozina sy ny fampandrosoana manerana ny firenena.
Azonao atao ny misotro rano amin'ny alàlan'ny angovo avy amin'ny masoandro
Nandritra ny taona maro, ny asa dia natao tamin'ny fanatsarana ny teknika amin'ny fisotroana rano. Azo atao ve ny misotro rano amin'ny alàlan'ny angovo avy amin'ny masoandro?
Costa Rica dia niasa tamin'ny angovo azo havaozina nandritra ny 250 andro tamin'ny 2016
Costa Rica dia afaka mirehareha fa nandritra ny 250 andro tamin'ny 2016 dia nafoiny tamin'ny loharano azo havaozina ny fampiasana herinaratra. Zava-bita.
Manaiky ny fihetsiketsehana hampiroborobo ny angovo azo havaozina any Espana
Nanaiky ny volavolan-dalàna hampiroborobo ny tetezamita angovo any Espana ny Plenary an'ny Kongresin'ny depiote omaly izay mikendry angovo azo havaozina.
Ny komisiona eropeana dia mikendry ny hanova ny tontolon'ny angovo
Ny komisiona eropeana dia nanolotra tolo-kevitra hahafahana manova ny lalàna mifehy ny angovo azo havaozina sy ny fanjifana tena.
Ny Tendrontany Avaratra dia 20ºC avo kokoa noho ny maripana mahazatra amin'ireo daty ireo
Ny fiovan'ny toetrandro dia miteraka amin'ity taona ity ary farany, amin'izao fotoana izao, dia miakatra be ny mari-pana amin'izay tokony ho izy
Ny sisa tavela amin'ny mananasy dia soloina solika
Ny iray amin'ireo solon'ny solika hitan'ny mpandraharaha dia ny zavamaniry mananasy. Afaka manolo menaka ve ny mananasy?
Manafatra hazo maharitra hahatratrarana tanjona azo havaozina ao amin'ny UE
Ny Vondrona eropeana. tanjona kendrena ho an'ny famokarana angovo azo havaozina avy amin'ny biomass ho an'ny taona 2030 ary ny hazo dia tokony hafarana mba hahatratrarana izany.
Gas natural Fenosa dia mikasa ny hampiasa vola amin'ny angovo rivotra any amin'ny Nosy Canary
Ny momba ny fampiasam-bola 100 tapitrisa euro eo anelanelan'ny Gran Canaria sy Fuerteventura hananganana toeram-piompiana rivotra 13.
Tontolo iray izay misy angovo azo havaozina, azo atao ve izany?
Tontolo iray izay mihazakazaka amin'ny angovo azo havaozina fotsiny dia mety indrindra hiadiana amin'ny vokatry ny fiovan'ny toetr'andro sy hanatsara ny toe-piainana eto an-tany.
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia niteraka saika 4% amin'ny angovo rehetra notakiana tamin'ny fahavaratra
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia nahavita nandrakotra saika ny 4% n'ny fangatahana herinaratra rehetra tany Espana tamin'ny fahavaratra, raha ny angom-baovao avy amin'ny Protermosolar.
Efa mihoatra ny vainafo ny loharano azo havaozina satria loharanon-kery eto amin'izao tontolo izao
Ny angovo azo havaozina dia mitentina mihoatra ny antsasaky ny fanomezana angovo isan-taona, mihoatra ny filàna sy ny fampiasana arintany.
Ny iray amin'ireo trano mahomby indrindra eto an-tany dia naorina ao Ibiza
Ny iray amin'ireo trano mahomby indrindra eto an-tany dia natolotra tao Ibiza tamin'ny kaonferansa famokarana angovo vokarin'i Terravita.
Loharano misy angovo azo havaozina ao ambanin'ny tanàna
Azonao atao ny manararaotra ny onja-drivotra ao anaty tionelina ambanin'ny tany sy ny dian-tongotra an'ny mpandeha an-tongotra mba hiteraka angovo rivotra.
Ny divay voalohany eto amin'izao tontolo izao dia namatsy tena azo havaozina any Rioja
Izy io dia mampiasa angovo azo avy amin'ny rivotra. Ny herinaratra vokariny dia avo roa heny amin'izay ilaina hiasa.
Manararaotra ireo loza ara-toetrandro, ny turbine ho an'ny rivodoza
Ny hery lehibe aterak'ireto tafio-drivotra tropikaly ireto dia azo ampiasaina hanomezana angovo noho ny turbinina rivotra manokana noforonina.
Fametrahana masoandro lehibe amin'ny fiompiana osy ao amin'ny Nosy Canary
Toeram-pambolena iray any Betancuria (Fuerteventura) no nandany angovo vokarin'ny orinasa mpamokatra herinaratra irery nandritra ny herinandro maromaro.
Mihatsara hatrany ny fanavaozana, saingy tokony hatao haingana kokoa
Ny World Energy Resources 2016, natolotra omaly tao Istanbul, dia nanambara fa ny fitomboan'ny tsenan'ny angovo azo havaozina tato anatin'ny 15 taona.
Ny manavao dia manana olana amin'ny fitadiavana famatsiam-bola any Espana
Ny sehatry ny fanavaozana dia tena voakasiky ny famatsiam-bola ambany nefa misy ny tetikasa mahazo izany noho ny fanavaozana.
Ny voatabia dia azo ambolena any an'efitra noho ny angovo avy amin'ny masoandro
Izy io dia zava-misy nataon'ny tanimboly mpisava lalana any Aostralia. Ny teknolojia hanatanterahana azy dia novolavolain'ny orinasa Danoa Aalborg CSP.
Ny sela vaovao dia manatsara ny fahombiazan'ny angovo amin'ny tranobe
Ny manam-pahaizana eropeana dia namorona sela fotovoltaika biolojika vaovao izay manatsara ny fahombiazan'ny angovo amin'ny trano.
Extremadura dia vondrom-piarahamonina mizaka tena izay manarona ny angovo be indrindra amin'ny havaozina
Extremadura dia lasa Community Autonomous of Spain izay manarona angovo herinaratra indrindra noho ny angovo avy amin'ny masoandro.
Manamboatra fatana ara-tontolo iainana any Nikaragoà ny vehivavy
Ny tanjon'izany dia ny hampihenana ny voka-dratsy ateraky ny lasantsy fôsily ary koa hampihena ny fandaniana ao an-tranony.
Orinasa manangana fanoloran-tena amin'ny tontolo iainana
Anisan'ireo orinasa natokana amin'ny fananganana any Espana, hitantsika ny sasany amin'izy ireo dia manolo-tena bebe kokoa amin'ny tontolo iainana.
Ny efatra amin'ireo karazana gidro enina lehibe dia atahorana ho lany tamingana izao
Ny gorila atsinanana dia voatanisa ao anaty lisitra mena amin'ireo karazana primata enina lehibe indrindra eto an-tany.
Ny tetezamita maharitra sy angovo any Alemana
Ny tetezamita angovo any Alemana dia mifototra amin'ny fampandrosoana ny angovo azo havaozina sy ny fampitomboana sy ny fahombiazan'ny loharanon-kery misy.
Fiarahan'ny PP sy ny olom-pirenena: Ny fanafoanana ny haba amin'ny masoandro
Ny fifanarahana nataon'ireo mpitarika roa tonta ho an'ny fampiasam-bola an'i Rajoy dia mihevitra ny fanafoanana ny hetra amin'ny masoandro izay nankatoavina tamin'ny didim-panjakana tamin'ny 2015.
Noho ny fanavaozana ny Andalusia dia mahavonjy euro an-tapitrisany
Redeja dia namela ny Fitondrana Andalosiana hitahiry mihoatra ny 5,3 tapitrisa euro isan-taona amin'ny fampiasana angovo.
Natolotra ny tatitra momba ny fananganana toha-biomassa ao Huesca
Ny orinasa Forestalia dia mikasa ny hanangana orinasa biomassa any Monzón, any Huesca. Ny tatitra dia mamakafaka ny vokatry ny kalitaon'ny rivotra.
Nahavita namokatra angovo azo havaozina i Alemana ka saika handrakotra tanteraka ny fangatahana angovo
Nahavita namokatra angovo azo havaozina i Alemana ka saika handrakotra tanteraka ny angovo angovo, 90%. 55 gigawatt no vokariny.
Ny orinasa elektronika E.on dia very 3.000 tapitrisa euro noho ny tsy fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina
Ny orinasa herinaratra E.on dia very 3.000 tapitrisa euro noho ny tsy fampiasam-bola amin'ny angovo azo havaozina. Ankehitriny dia manana fomba vaovao hiova ianao.
Raiso ho angovo azo havaozina any Espana amin'ny ho avy
Fanararaotana no azo havaozina any Espana, kanefa tokony hanararaotra ny fananganana ny governemanta vaovao isika handinika lafin-javatra lehibe.
Ny angovo azo havaozina (fantatra koa amin'ny anarana hoe madio) dia ireo angovo rehetra izay tsy miteraka gazy entona na ...
Tesla nividy SolarCity ihany tamin'ny farany, teraka ny fampitambarana fanavaozana
Elon Musk, tompon'arivony tapitrisa an'ny Tesla, dia nanapa-kevitra ny hividy ny orinasa SolarCity 2.600 miliara dolara.
Tetikasa SALSA: mamerena fiara elektrika misy angovo azo havaozina
Albufera Energy Storage, orinasa iray natokana ho an'ny angovo sy bateria, dia namorona ny tetikasa SALSA mba hanomezana vola ireo fiara elektrika amin'ny angovo azo havaozina
Achim Steiner: Espaniola dia ho mpitarika ny angovo azo havaozina raha tsy noho ny krizy ara-toekarena
Raha ny filazan'i Achim Steiner, talen'ny mpanatanteraka teo aloha an'ny UNEP, dia tokony ho mpitondra angovo azo havaozina eran-tany i Espana raha tsy noho ny krizy.
Miala kely hatrany amin'ny angovo azo havaozina i Espana
Nandritra izay taona rehetra izay, raha nanatsara ny teknolojia azo havaozina ny sisa amin'ny Vondrona Eropeana sy izao tontolo izao, dia nanao ny mifanohitra amin'izany kosa i Espana.
Cyclalg, tetik'asa eropeana amin'ny famoronana orinasa biorefera misy ahidrano
Cyclalg dia tetikasa manohy ny dingana tavela tamin'ny tetikasa Energreen teo aloha, izay ny tanjony dia ny famoronana biodiesel amin'ny alàlan'ny microalgae.
El Hierro dia mamaky ny firaketany amin'ny fampiasana angovo azo havaozina
Ny nosy El Hierro dia nahavita nijanona nandritra ny 55 ora nisesy ary nanome hery vaovao azo havaozina ihany. Rivotra sy rano no loharano niavian'izany.
Barcelona dia hamorona orinasam-barotra ho an'ny angovo azo havaozina
Barcelona dia hamorona orinasa iray hividianana sy hivarotana angovo azo havaozina novokarina tamina tranobe na trano ho an'ny daholobe tamin'ny 2019.
Ny nosy voalohany amin'ny Mediterane izay tsy misy afa-tsy amin'ny angovo azo havaozina
Tilos, nosy iray any amin'ny Ranomasina Mediteraneana, no voalohany tsy nahazo hery afa-tsy nohavaozina noho ny tetikasa "Horizonte Tilos"
Trano fonenana iray any Madrid no manana fametrahana geothermal lehibe indrindra any Espana
Trano fonenana naorina ao Madrid no manana fametrahana angovo azo avy amin'ny geothermal azo havaozina lehibe indrindra any Espana mba hampitomboana ny fahombiazany.
Ilay zavamaniry biogas agro-indostrialy voalohany ao Andalusia
The Sociedad Agroenergía Campillos SL. manomboka ny orinasa biogas agro-indostrialy voalohany ao Andalusia izay hamokatra angovo maitso sy zezika.
Roa mirahalahy avy any Kerala no mamorona turbine rivotra mora vidy izay hanova ny tsena
Rahalahy roa avy any Kerala, faritra iray any India, te-hanavao ny tsena amin'ity turbine ity izay mamokatra herinaratra ampy ho an'ny trano iray
Angovo tondra, ny ho avin'ny angovo azo havaozina
Manoloana ny tsy fahampian'ny harena voajanahary sy ny fitakiana toetr'andro vaovao, ny herin'ny onja dia maneho ankehitriny ...
Sela azo avy amin'ny masoandro azo zahana Photovoltaic
Hatramin'ny taona 2011 sy ny fisehoan'ny WYSIPS amin'ny haino aman-jery dia mandre momba ny sela mangarahara ho an'ny rindranasa maro izahay, ny glazera amin'ny masoandro, ...
Ny herin'ny masoandro dia mety hanjaka amin'ny fanavaozana amin'ny 2030
Mikasika ny angovo madio, angovo avy amin'ny masoandro, manimba ny fampandrosoana haingana dia haingana mandritra ny 5 taona, mitohy ...
Ny 99% ny herinaratra any Costa Rica dia avy amin'ny havaozina
Costa Rica dia nahatratra 99% ny herinaratra azo tamin'ny angovo azo havaozina tamin'ity taona 2015 ity.
Rawlemon, tontolon'ny masoandro matanjaka kokoa noho ny panneaux photovoltaic
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny taona maro, nanomboka ny asany ara-barotra ny mpanangona masoandro Rawlemon. Noforonin'ny mpanao maritrano alemanina izy io, baolina mangarahara feno rano afaka mamadika angovo mihoatra ny 70% noho ny tontonana masoandro mahazatra.
Photovoltaics dia handray ny 10% amin'ny taranaka manerantany amin'ny taona 2030
Omaly tany Madrid ANPIER dia nanao ny Fihaonambe Iraisam-pirenena II izay nahitana angona tena mahaliana tamin'ny taranaka photovoltaic manerantany ho an'ny 2030
400 heny mahery noho ny tontolon'ny masoandro nentim-paharazana izay mamokatra ity balaonina masoandro ity
Ireto balaonina amin'ny masoandro ireto dia mety ho mpampiroborobo fiovana lehibe mifandraika amin'ny angovo avy amin'ny masoandro manerana ny planeta.
SolarCity dia manambara ireo takelaka masoandro mahomby indrindra eto an-tany
SolarCity dia nanambara 3 andro lasa izay ny tontolon'ny masoandro izay mahomby indrindra amin'ny fotoana misy 22 isan-jato.
Tany amin'ny 2000, izay toeram-piompiana rivotra voalohany
Tany amin'ny taona 2000 no toeram-piompiana rivotra voalohany teto an-tany tamin'ny taona 1981 raha namboarina hatanjaka ny morontsiraka Pasifika any Etazonia.
Ny havaozina dia mamokatra angovo 32,5% any Alemana amin'ny tapany voalohan'ny taona
Tamin'ny tapaky ny taona, ny herin'ny angovo vokarin'ny fanavaozana dia nahatratra 32% tany Alemana, naneho ny fahalianany amin'ny angovo madio.
Mampitombo ny 34% ny fahombiazan'ny masoandro any Suède
Mahatratra 34% ny tarehimarika mahomby amin'ny masoandro, izay avo roa heny noho ny takelaka mahazatra an'ny masoandro
Tasmania dia mijery ho avy maitso havaozina 100%
Tasmania dia manana tombony lehibe azo havaozina maintso ary fantatr'izy ireo izany ary te-hanararaotra izany betsaka indrindra izy ireo
Angovo avy amin'ny masoandro voangon'ny sambo sambo
Orinasa frantsay no namolavola sela fotovoltaika napetraka tao anaty lay ny sambo ary afaka manome 1 kW.
Tany efitra no faritra tsara indrindra hametrahana foibe mpamokatra herinaratra mifantoka amin'ny masoandro
Vondronà mpahay siansa mahita ny tany efitra ho faritra mety indrindra amin'ny toerana misy ny toby famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro (CNP)
Ny toeram-piantsonana misy canopies amin'ny masoandro dia hevitra tsara
Betsaka ny toeram-piantsonan'ny fiara ao an-tanàna ary raha rakotry ny canopie avy amin'ny masoandro izy ireo dia hanana tombony maro
Mahatratra hatrany amin'ny 45 tapitrisa taonina ny CO2 afaka mamonjy toeram-piompiana rivotra manara-penitra
Mitahiry CO45 hatramin'ny 2 tapitrisa taonina, vola mitovy amin'ny CO2 entin'ny ala 1286 km2 mandritra ny 25 taona
'Wind Tree', turbine rivotra vaovao izay toy ny hazo ary miteraka hery mangina
Wind Tree dia turbine rivotra mangina tanteraka miaraka amina endrika hazo tonga lafatra amin'ny tontolo an-tanàn-dehibe
Ny turbinina tsy misy mpitifitra dia tonga miaraka amin'ny tetikasa Vortex
Ny turbine propellerless vortex dia mety ho iray amin'ireo teknolojia manan-danja indrindra amin'ny fanavaozana natomboka tamin'ity taona ity sy tamin'ny lasa
Resadresaka ifanaovana amin'ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana Siemens Spain Power Matrix Challenge
Ny alarobia lasa teo dia nomena ny loka Siemenes Power Matrix Challenge ho an'ny tetikasa matrix maharitra maharitra tsara indrindra
Ny 'hazo solar' an'i Isiraely ho loharanon'ny herinaratra sy Wi-Fi
«Hazo masoandro» hanomezana herinaratra sy Wi-Fi any amin'ny valan-javaboary. Ny tolo-kevitra vaovao an'ny orinasa israeliana
PlanetSolar, sambo ampiasain'ny herin'ny masoandro 100%
PlanetSolar dia nitety an'izao tontolo izao izay tsy nitondra afa-tsy angovo masoandro 100%
E1, mpamokatra thermoelectric izay mandeha tsy misy solika
Alphabet Energy dia namolavola mpamokatra herinaratra izay tsy mampiasa solika, fa kosa mampiasa hafanana maloto avy amin'ny masinina indostrialy
Mialoha ny angovo miorina amin'ny solika any amin'ny firenena Nordic ny rivotra
Ohatra iray ho an'izao tontolo izao ataon'ny firenena avaratra amin'ny fanavaozana
Ny fianakaviana Rockefeller dia nanova ny fampiasam-bolany avy amin'ny solika fôsily ho amin'ny havaozina
Ny fianakavian'i Rockefeller dia manolo-tena amin'ny angovo madio sy azo havaozina amin'ny alàlan'ny fanariana ny fananany ao anaty lasantsy fosily
Tonga ny mpamokatra herinaratra an-dranomasina voalohany
Tsy maintsy ampiasaina tsara araka ny tokony ho izy ny angovo ampakarina, satria misy loharano tsy mety ritra hita ao amin'ny ranomasina
Sela Photovoltaic amin'ny loko spray
Ireo mpikaroka ao amin'ny University of Sheffield, any Angletera, dia namorona sela fotovoltaika izay azo apetraka toy ny loko aerosol.
Ny ampahatelon'ny angovo lanin'i Alemana dia avy amin'ny angovo azo havaozina
Notapahin'i Alemana indray ny vinavinan'ny mpamaky tamin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina 75 isan-jato
Nahazo vahana ny angovo avy any masoandro any Aostralia
Any amin'ny faritra lavitra toa ny fanjakan'i Queensland dia lasa zava-misy ho an'ny mponina ao aminy ny angovo avy amin'ny masoandro
Ny herin'ny ranomasina
Ny herin'ny ranomasina dia avy amin'ny angovo, kinetika, hafanana ary angovo simika an'ny ranomasina, izay azo ampiasaina hamokarana herinaratra, angovo mafana na rano fisotro.
Kitapo photovoltaic mametaka tena, ny revolisiona vaovao
Lahatsoratra mahaliana momba ny tontolon'ny masoandro miraikitra amin'ny tena namboarin'ny vondrona mpikaroka ao amin'ny University Stanford
Irlandy hamatsy herin'ny rivotra any UK
Lahatsoratra mahaliana izay anoloranay sy lanjanay ny tetikasa nosoniavina teo Irlandy sy i Angletera mba hahazoan'ity farany herinaratra avy amin'ilay teo aloha
Ahoana ny fomba hananantsika ny angovo namboarinay manokana?
Horonantsary mahaliana izay ianarantsika ny fanaovana ny herin'ny rivotra avy any an-trano amin'ny alàlan'ny dingana iray somary tsotra sy amin'ny vidiny mirary
Jereo ny University Career of Renewable Energies
Lahatsoratra mahaliana momba ny asa efa misy ao amin'ny Oniversite Britanika momba ny angovo azo havaozina
Fananganana kininina (I)
Lahatsoratra mahaliana momba ny fananganana milina fitaratra an-trano.
Fitsaboana rano maloto mampiasa angovo azo avy amin'ny masoandro
Lahatsoratra mahaliana momba ny tetikasa izay novolavolaina tao amin'ny Oniversiten'i Almería ho an'ny fitsaboana rano maloto.
Ny angovo geothermal dia mitahiry ny 70% amin'ny fanjifana angovo amin'ny tokantrano tokana
Lahatsoratra mahaliana momba ny fanavaozana novokarina tamina tokantrano tokana nahatratra 70% fitehirizana angovo noho ny angovo geothermal.
Azo atao ve ny mamatsy tanàna feno herinaratra azo havaozina?
Lahatsoratra mahaliana izay ametrahantsika sy hamaliantsika amin'ny ampahany ny fanontaniana: Azo atao ve ny mameno tanteraka ny angovo eto an-tanàna?
Rivotra mamoaka ny rivotra avy amin'ny rivotra
Lahatsoratra mahaliana momba ny famoronana vaovao ny Eole Water, izay misy turbinin-drivotra entiny mamadika ny rano mikitroka ao amin'ny atmosfera ho rano ho fampiasa.
Ny angovo azo havaozina dia manampy amin'ny fampihenana ny fandotoana
Ny angovo azo havaozina dia miasa mba hampihenana ny fandotoana any amin'ny firenena samy hafa, satria io no tanjona lehibe iray rehefa dinihina ireo tetikasa angovo vaovao hafa toa ny
Mandrosoa ny angovo avy any Rosiana
Ny angovo azo havaozina dia mandroso haingana be any Venezoela, iray amin'ireo firenena any Amerika atsimo izay te-hahazo angovo avy amin'ny loharano voajanahary mba hiomanana amin'ny ho avy
Tetikasa angovo avy amin'ny masoandro ho an'ny sekoly ambanivohitra
Ny tetik'asa angovo masoandro mahaliana tsikelikely novolavolaina ho an'ny sekoly any ambanivohitra. Ny iray amin'ireo tetik'asa ireo dia nifarana tao Vélez, misy ny sekoly ambanivohitra sasany
Angovo azo havaozina manan-danja ao amin'ny fiompiana rivotra Guajira
Ny faritr'i La Guajira dia sambatra manana toeram-piompiana rivotra miasa ary tsy isalasalana ...
Nanoteknolojia ho an'ny angovo avy amin'ny masoandro
Ny fandrosoana vaovao eo amin'ny sehatry ny nanoteknolojia dia mifandraika amin'ny sehatry ny angovo avy amin'ny masoandro, indrindra ...
Ny fitomboan'ny angovo azo havaozina any Polonina
Tamin'ny 2011, 8,8% ny fanjifana angovo avy amin'ny loharanom-baovao azo havaozina ao Polonia, ary 56% amin'izany ny angovo vokarin'ny biomassa.
Angovo geothermal noho ny volkano
Any Etazonia dia natao ny hametrahana volokano tsy miasa hiasa tsara, manokana natao hampiasa ny vatolampy ...
Rafitra biogas miorina amin'ny fako kisoa any Arzantina
Any Córdoba, Arzantina, ny taim-kisoa dia ampiasaina hamokarana angovo
Ny angovo azo havaozina dia mitombo raha oharina amin'ny fangatahana manerantany
Firenena tsikelikely no mampitombo ny loharanon'angovo azo havaozina isanisany ary manakaiky ny isan-jaton'ny ...
Mampitombo ny fahafaha-manaony amin'ny angovo azo havaozina ny Repoblika Dominikanina
Tao anatin'izay volana vitsivitsy izay, be ny asa efa vita teto amin'ny Repoblika Dominikanina hanatsarana ny fahafaha-mamokatra angovo azo havaozina sy ...
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia manampy amin'ny fampihenana ny fandotoana
Na dia amin'ny ankapobeny aza, ny loharano angovo azo havaozina rehetra dia mahaliana mampihena ny fandotoana, iray amin'ireo manampy ...
Afrika atsimo sy ny mety ho herin'ny masoandro
Mety ho mpamokatra angovo lehibe amin'ny masoandro i Afrika Atsimo amin'ny ho avy
Zava-dehibe ny fampiasana akora ekolojika
Angovo azo havaozina ao Campeche
Ao Mexico dia misy toerana maro izay misy angovo azo havaozina manana toerana itiavany azy ary ao Campeche dia ...
Acciona, sambo lakana mampiasa angovo azo havaozina
Ny angovo azo havaozina dia azo ampiasaina amin'ny faritra samihafa ary ny iray amin'ireo faritra ireo dia amin'ny regattas. Vita ny amin'iny…
Mivoatra amin'ny angovo biomassa i Peroa
Nandritra ny fotoana kelikely dia liana amin'ny angovo azo havaozina sy amin'ireo karazana ...
Ny angovo azo havaozina dia manampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro
Ny fampandrosoana ny angovo azo havaozina dia samy manana ny tanjony, fa ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra tsy isalasalana fa ny ...
Angletera sy loharanon'angovo azo havaozina amin'ny 2030
Angletera sy angovo azo havaozina
Doka amoron-dàlana miaraka amin'ny angovo avy amin'ny rivotra
Afisy dokambarotra mampiasa angovo rivotra
Ny tetik'asa rivotra any Sucre dia voaomana
Ao amin'ny faritra Sucre any Venezoelà, misy tetikasa angovo mahaliana mahaliana iray manomboka mianatra, a ...
Tetikasa angovo mahaliana mahaliana any Kansas
Ny orinasa BP dia mikasa ny hanao tetikasa angovo mahaliana amin'ny masoandro any Kansas any Etazonia, ...
Maniry ny hanana 50% ny angovo azo havaozina i Uruguay
Any Uruguay, dingana lehibe no andraisana fepetra hiantohana ny fitomboan'ny angovo azo havaozina, hatrany amin'ny ...
Coca Cola dia hampiasa angovo avy amin'ny masoandro amin'ny zavamaniry any Afrika Atsimo
Coca Cola dia hampiasa angovo avy amin'ny masoandro amin'ny zavamaniry iray any Afrika atsimo
Biribe misy fiantraikany amin'ny tontolo iainana ambany
Hividy angovo maintso ny labiera Mahou
Sarety golf mandeha amin'ny herin'ny masoandro
Sarety golf mandeha amin'ny herin'ny masoandro mahomby
Ny fiantraikan'ny angovo avy amin'ny rivotra amin'ny tontolo
Amin'ny faritra samihafa any Espana sy faritra hafa eto amin'izao tontolo izao dia afaka jerena ny tontolon'ny ahitanao ny ...
Rivotra mahery ao an-trano
Azo atao ny mampiasa angovo rivotra ao an-trano
Ireo firenena izay mividy sy mivarotra herinaratra
Misy ny firenena mividy ary ny hafa mivarotra angovo
Manampy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro ny herin'ny rivotra
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia omena lanja ankehitriny araka ny tokony ho izy, satria karazana angovo izay ...
Batterie azo ovaina
Ny bateria biodegradable dia ho safidy mandritra ny taona ho avy
Ny trano maintso dia sarobidy kokoa amin'ny tsenan'ny trano sy tany
Trano maitso dia fampiasam-bola lehibe
Tecnosfera, tranobe boribory mahavariana indrindra eto an-tany
Ny technosfera dia tranokala eco-friendly any Dubai
Manamafy ny fiovan'ny toetrandro ny tohodrano any amin'ny faritra tropikaly
Miteraka fandotoana ireo tohodrano any amin'ny faritra tropikaly
Manana loharano isan-karazany mahavita miteraka angovo ny ranomasina
Ny ranomasina dia manolotra loharanom-pahalalana isan-karazany mety hiteraka famokarana angovo: ny rivotra, ny onja, ny onja, ny tsy fitovian'ny maripana sy ny sira, ny fepetra miaraka amin'ny haitao mety hampiova ny ranomasina sy ny ranomasina ho loharanon'ny angovo azo havaozina.
Mampiasa angovo avy amin'ny masoandro i Nestlé amin'ny fanaovana gilasy
Ny orinasan-dronono an'i Nestle dia nametraka rafitra angovo avy amin'ny masoandro
Modely vaovao an'ny takelaka masoandro misy loko no natolotra
Lamba misy panneaux solaires izay mamokatra angovo
Ny haitao masoandro amin'ny lamba dia iray amin'ireo tetikasa manavao indrindra amin'ny resaka angovo madio
Mexico sy ny toby famokarana herinaratra vaovao
Zavamaniry fananganana cogeneration vaovao misy angovo biomass any Mexico mampanantena ny hamokatra angovo madio kokoa hampijanona miankina amin'ny solika fôsily
Ririnina avy amin'ny masoandro: ny tontonana amin'ny masoandro dia mamokatra fampangatsiahana ho an'ny rivotra
Azo atao ny mahazo mangatsiaka avy amin'ny panneaux solaire photovoltaic hampandehanana ny aircon amin'ny fomba ekolojika: mampihena ny fanjifana angovo sy ny etona CO2.
Jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro voalohany any Arzantina
Ny jiro masoandro voalohany eto Arzantina
Ny làlana dia mety hiteraka angovo kinetika
Ilay injeniera anglisy Peter Hughes dia namorona tavy manararaotra ny hetsika ateraky ny fandalovan'ny fiara hamoronana angovo sy hamatsiana jiro ampahibemaso hatramin'ny 1,5 km.
Ny angovo Piezoelektrika dia mamadika ny hetsiky ny olombelona ho lasa herinaratra
Ny angovo Piezoelektrika dia afaka mamokatra herinaratra amin'ny alàlan'ny tsindry na fikororohana izay vokarin'ny olombelona amin'ny fitaovana sasany rehefa mihetsika isika. Ny fitaovana dia voajanahary na sentetika.
Ny angovo azo avy amin'ny onja dia avy amin'ny fihetsiky ny onja
Ny onja miaraka amin'ny hetsik'izy ireo dia mamokatra angovo azo havaozina izay azo ampiasaina hamokarana herinaratra amin'ny alàlan'ny teknolojia mifanaraka amin'izany.
Ny tontolon'ny masoandro dia afaka manome angovo hopitaly
Ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia voahilikilika tamin'ny fitomboan'ny sehatra noho ny fihenan'ny sehatry ny trano sy trano, ka izany no antony ampiroboroboana ny vokatra any amin'ny faritra hafa toy ny hopitaly na hampiasaina amin'ny vata fampangatsiahana.
Fotoana famerenam-bola amin'ny angovo azo havaozina
Alohan'ny hanaovana fampiasam-bola, ny iray amin'ireo fanontaniana hamakafaka dia ny fotoana fiverenan'ny fampiasam-bola. Bebe kokoa…
Hotely ekolojika: safidy fizahan-tany tompon'andraikitra
Ny trano fandraisam-bahiny maintso dia tsy maintsy mahafeno fepetra takiana mba hahafeno fepetra amin'izany. Izy ireo dia safidy iray hafa hampiharana ny fizahan-tany mahomby sy maharitra.
Trano biolojika (1). Orientation atsimo
Trano ampiasaina amin'ny tontolo iainana hanatsara ny haren'ny tontolo iainana ho toy ny mekanika hitsaboana angovo, vola ary hanaovana fananganana manaja ny tontolo iainana.
Ny lalàna mifehy ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra dia manamafy ny filàna angovo madio madio (II)
Ny lalàna manatsara ny herinaratra Hydroelectric dia
Ny tontolo voajanahary voajanahary sy ny angovo azo havaozina
Ny angovo azo havaozina dia manolotra loharano maro isan-karazany hamokarana angovo madio
Belzika sy ny fitomboany amin'ny famokarana angovo rivotra
Any Belzika, ny fanamby hamokarana mihoatra ny
Turbine any atsimo izay mamokatra angovo
Ny turbines anaty rano dia ahafahana manararaotra ny onjan-dranomasina hamokarana angovo
Ny niandohana sy ny tantaran'ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia loharanon'ny fampiasana angovo maoderina
Revolisiona indostrialy fahatelo
Ny revolisiona indostrialy fahatelo dia miorina amin'ny angovo azo havaozina
Ahidrano hanaovana plastika
Algaeventure Systems (AVS), dia iray amin'ireo maro
Orinasa havaozina azo havaozina any Espana, tapany II
Avy amin'ny ampahany I ENERCO RENOVABLES
Bisikileta elektrika ho an'ny be taona
Ny orinasa Panasonic dia mivarotra bisikileta elektrika ho an'ny be antitra
Biodigesters any ambanivohitra Arzantina
Ny biodigesters dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny sehatry ny Arzantina
Angovo herinaratra any Eropa
Eoropa no faritra an'izao tontolo izao manana fahaiza-manao lehibe indrindra
Angovo avy amin'ny masoandro hametrahana amin'ny tampon-trano na amin'ny tany?
Angovo avy amin'ny masoandro sy ny fametrahana azy samy hafa amin'ny tampon-trano na amin'ny tany
CO2 sy ny fahasalamam-bahoaka
CO2 tsy manova ny toetrandro ihany fa manimba ny fahasalaman'ny mponina
Angovo avy amin'ny rivotra, turbinin'ny rivotra I
Ny turbine rivotra dia karazana motera rivotra afaka
Ampy ve ny angovo eto amin'izao tontolo izao ho an'ny rehetra?
Ampy ny angovo ho an'ny tsirairay raha loharano azo havaozina no ampiasaina
Fitrandrahana tompon'andraikitra amin'ny loharano azo havaozina
Ny fitrandrahana ireo angovo azo havaozina dia mety hisy vokany ratsy eo amin'ny tontolo iainana
Ny Sahara sy ny mety ho loharanon'ny angovo
Ny Sahara dia manana tanjaka lehibe indrindra ho tonga loharanon-kery lehibe indrindra eto an-tany.
Kininina toy ny biomassa
Kininina ho toy ny akora ho an'ny biomassa
Loharanon-kery lehibe azo avaozina
Misy firenena manana loharanon-kery lehibe azo havaozina
Fiainana ilaina amin'ny teknolojia amin'ny famokarana angovo
Fiainana ilaina amin'ny teknolojia misy loharanom-pahalalana angovo azo havaozina sy mahazatra
Fandripahana ala sy fisamborana CO2
Ny ala dia manimba ny toe-javatra iainana amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny tsy fahafahany mandray CO2
Antarctica sy angovo azo havaozina
Ny indostrian'ny fifandraisan-davitra sy ny angovo azo havaozina
Ny angovo fifandraisan-davitra dia mila angovo azo havaozina haharitra
Fiarovana amin'ny herinaratra sy fiovan'ny toetr'andro
Mety hisy fiatraikany amin'ny famokarana angovo angovo eto amin'izao tontolo izao ny fiovan'ny toetrandro
Angovo azo tamin'ny balaonina rivotra mafana I
Ny balaonina rivotra mafana dia afaka mamokatra angovo. Ity famoronana Australiana ity dia afaka mamokatra angovo amin'ny alàlan'ny balaonina ...
Torohevitra momba ny fisafidianana takelaka masoandro ho an'ny tranontsika
Rehefa mihabe ny vola fanampiana sy ny fanampiana ny angovo avy amin'ny masoandro dia maro ny olona ampirisihina hividy panneaux solaires ...
Hotely misy angovo avy amin'ny masoandro
Sehatra ara-toekarena lehibe ny indostrian'ny hotely satria misy hotely an'arivony maro isan-karazany eto an-tany….
Azia sy angovo azo havaozina
Ny firenena aziatika tao anatin'ny folo taona lasa dia nivoatra sy nivelatra tamin'ny sehatra toekarena sy sosialy rehetra. Ity kaontinanta ity dia ...
Tafo fitaratra energie
Fambolena iray no napetraka tao Malaga, izay misy tafo vita amin'ny vera, izay ...
Hygroelectricité, manovo angovo avy amin'ny hamandoan'ny rivotra.
Mpikaroka marobe no nandefa fanadihadiana momba ny mety hisian'ny angovo avy amin'ny hamandoan'ny rivotra, ...
Ireo firenena amin'ny fehikibo masoandro na masoandro
Ireo firenena amin'ny latitude + - 35 mikasika an'i Ekoatora dia fantatra amin'ny anarana hoe faritra main'ny masoandro ...
Nanoteknolojia amin'ny sehatry ny angovo
Ho an'ny manam-pahaizana maro dia ilaina ny manova ny sehatry ny angovo, tsy hoe hampiditra angovo azo havaozina fotsiny fa ...
Trano fonenana misy fametrahana angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic
Indraindray, ny loharano tsotra indrindra sy ekolojika indrindra, dia mety ho fanampiana lehibe ary hiara-hientana amin'ny famatsiana angovo ...
Ny nopal hamokarana angovo
Ny nopal dia vokatra iray izay be siramamy misy alikaola avo lenta ka manana kalitao ...
Brezila sy biofuel
I Brezila dia iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra any Amerika Latina noho ny habeny sy ny harinkarena goavany izay ...
Avereno jerena ny modules na panneaux solaires
Tahaka ny vokatra rehetra, ny tontolon'ny masoandro photovoltaic dia manana fiainana voafetra voafetra. Ny tsingerin'ny fiainany dia manana salanisa ...
Mitsitsy angovo sy manodina
Any amin'ny firenena rehetra, hampiroborobo ny fanodinana entana tsy hampihena ny fako fotsiny fa hanampiana ...
Angovo avy amin'ny masoandro amin'ny fambolena
Ny angovo avy amin'ny masoandro dia manana fampiharana maro, iray amin'ireo novolavolaina faran'izay kely dia ny fampiasana ny asa fambolena. Ity teknolojia ity…
Famantaranandro ara-tontolo iainana
Ny karazana vokatra rehetra ampiasaina isan'andro dia aseho eo amin'ny tsenan'ny singa tia tontolo iainana sy ...
Herin'ny rivotra izay miasa tsy misy rivotra
Ny angovo avy amin'ny rivotra dia iray amin'ireo loharano lehibe ilain'ny angovo azo havaozina ary iray izay manaitra ny fahalianana lehibe amin'ny ...
Loza ara-pahasalamana amin'ny fampiasana biomassa
Any amin'ny firenena mahantra na tsy dia mandroso, dia tena mahazatra ny fampiasana kitay, sisa tavela, arina, sns. mba…
Laharam-pirenena sy dian-tongotra ekolojika
Ny WWF's Living Planet Report dia tatitra novokarina isaky ny roa taona izay hamakafaka ny toe-javatra ...
Afrika sy angovo azo havaozina
Africa dia manana 15% ny mponina manerantany amin'ny faritany midadasika ary kontinanta manana fahantrana lehibe indrindra ...
Pellets ho loharanom-angovo
Pellets dia vokatra azo avy amin'ny hazo, izay zakaina hanovana azy ho granulate, ...
Conditioner amin'ny rivotra avy amin'ny masoandro
Ny vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana dia mahazatra indrindra amin'ny sehatra rehetra fa iray amin'ny sehatra ...
Ireo firenena manana fivoarana betsaka amin'ny haitao azo havaozina
Miroborobo eran'izao tontolo izao ny teknolojia sy ny teknika miorina amin'ny angovo azo havaozina. Saingy misy firenena sasany ...